January 3, 2022 - ApannPyay Media
အမျိုးသမီးများအသက် ကရမက်တဲ့ ကရမက်က ဘာတွေကောင်းလဲ
January 3, 2022 by ApannPyay Media
အမျိုးသမီးများအသက် ကရမက်တဲ့ ကရမက်က ဘာတွေကောင်းလဲ “နံ့သာဖြူနံ့သာနီ အကျော်စမ္မာ ကရမက်ဆိုတဲ့နံ့သာငါးမျိုးစာရင်းဝင်”ကရမက် အကြောင်းရှင်းပြပါရစေ ကရမက်ကအေးခါး အရသာနဲ့အပူကိုစုပ်ယူပေးနိုင်တဲ့ဆေးပါ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက် အပူများလို့ဖြစ်လာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအောင်းပူတွေဟာ အသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပြတတ်ကြပါတယ် တစ်ချို့ကအပူအစပ်စားအအေး‌သောက်လို့မထွက်ရတဲ့အခိုးတွေစုဖွဲ့ တာ တစ်ချို့က ကံ စိတ်ဥတုအာဟာရတစ်မျိုးမျိုးကြောင့် အကြိတ် အဖု ရည်ကြည်အိတ် နဲ့ဆီးအိမ်နားကစုဖွဲ့ပူလို့ ခြေဖဝါးကစူးလို့ပူတာမျိုး မီးယပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရာသီသွေးဆုံးခါနီးဖြစ်တဲ့အရေပြားပေါ်ကအကွက်တွေ ခန္ဓာကိုယ်ယားယံတာတွေ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ရေကိုဝအောင်ချိူး ပြီးရင်ကရမက်လေး ရေကြဲလေးလိမ်း အပူထွက်ပြီး အပူအောင်းတာသက်သာတော့အဖုအကြိတ် အရည်ကြည်အိတ် စတာတွေ သက်သာတယ်ရေကိုဝအောင်ချိုးပြီး ကရမက်လေးကိုသွေးပြီးလျက်ပေးရင်လည်းလျှာကနေတစ်ကိုယ်လုံးကအကြောတွေဆီရောက်ပြီး ကျန်းမာသက်ရှည်အပူအခိုးကင်းစေပါတယ်။ သွေးလိမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်သောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သလိပ်ကြေစေတယ် နှလုံးရောဂါ ဆီးရောဂါနဲ့ညောင်းကျရောဂါတွေလည်းပျောက်ကင်းစေပါတယ် အပူများသူတွေ နေပူမီးပူထဲအလုပ်လုပ်ရသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကကရမက်ပါ။ နေ့စဉ် ကရမက်လေးအသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ ဆေးဖက်အသုံးဝင်ပုံ “ဆီး ( ပူ၊နည်း၊ဝါ) ၊ ကျောက်ကပ်တွင်း အပူအောင်းပြီးခါးနာခြင်း၊ ဆီးအရောင်နောက်ခြင်း၊ … Read more
အသားညိုမည်း သူများအတွက် 100 ရာခိုင်နှုန်း ထိရောက်မှုရှိတဲ့ အသားဖြူနည်း
အသားညိုမည်း သူများအတွက် 100 ရာခိုင်နှုန်း ထိရောက်မှုရှိတဲ့ အသားဖြူနည်း အသားဖြူ ဆေးတွေသောက်တာက တကယ်ရောဖြူရဲ့လား ဘေးရောကင်းရဲ့လား လိုးရှင်းတွေကရော အမှန်တကယ် ဖြူ လာရဲ့လား နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုခံရခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်လေထုညစ်ညမ်းခြင်း ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အသားခြောက်ခြင်း စိတ်ဖိစီးမှု၊လူနေမှုပုံစံမှားယွင်းခြင်းဓါတုပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သုံးစွဲခြင်းတို့ကြောင့် အသားညိုမည်းခြင်းကို ဖြစ်လာစေပါတယ် အသားဖြူ ချင်လို့ နည်းလမ်းများစွာသုံးပြီး ပြုလုပ်နေကြပေမယ့် အမှန်တကယ် ထိရောက်မှုရှိရဲ့လား ဘေးကင်းရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုတော့ သေချာမဖြေနိုင်ကြပါဘူး ဒ့ါအပြင် အချို့နည်းလမ်းတွေကလည်း ငွေကုန်ကြေးကြများတဲ့အတွက် လူတိုင်းမတတ်နိုင်ကြပါဘူးဒါ့ကြောင့် ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်တဲ့ အသားဖြူနည်းလမ်းကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် ဒီနည်လမ်းကို အပိုင်း ၂ပိုင်းခွဲပြီး လုပ်ရမှာပါ ပထမအပိုင်းမှာတော့ scrub လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ပထမဦးစွာ scrub လုပ်ရန်အတွက် ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲသို့ သကြား … Read more
တစ်ကြိမ်တည်း လုပ်ရုံနဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ပျောက်ကင်းသွားစေတဲ့နည်း
တစ်ကြိမ်တည်း လုပ်ရုံနဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ပျောက်ကင်းသွားစေတဲ့နည်း လှတဲ့ သူတိုင်း ဆားဝက်ခြံ ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဆားဝက်ခြံ ရှိနေတာတော့ ဘယ်သူမှ ကြိုက်ကြမယ် မထင်ပါဘူး ။ ဆားဝက်ခြံ တွေဟာ နှာခေါင်း ၊ မေးစေ့နှင့် ပါးပြင် တွေမှာ အများဆုံး ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ညှစ်ရင်လည်း ပွါးတတ် တာကြောင့် အတော် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ် ။ ဒီထက်ပိုးဆိုးလျှင် အပေါက်အကြီးကြီးတွေ ဖြစ်ပြီး မျက်နှာမှာ ကြည့်ရ ဆိုးပါတယ် ။ ဆားဝက်ခြံ သက်သာ စေတဲ့နည်း တွေကတော့ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ ဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းလေး ကတော့ လွယ်ကူပြီး ရိုးရှင်းပါတယ် ။ ဆားဝက်ခြံ ကို … Read more
ကမ္ဘာကျော် ကျားပရုတ်ဆီ ရန်ကုန်မြို့ တရုတ်တန်းက စခဲ့သည် ဆိုတာသင်သိပါသလား
ကမ္ဘာကျော် ကျားပရုတ်ဆီ ရန်ကုန်မြို့ တရုတ်တန်းက စခဲ့သည် ဆိုတာသင်သိပါသလား ဆေးဆိုင်များတွင် ရောင်းချနေသော ‘ကျား’ပရုတ်ဆီ။ သီရိလူ/မြန်မာတိုင်း(မ်)တရုတ်စာလုံးတွေပါတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ တရုတ်ရိုးရာ အိမ်ဟောင်းကြီးတွေ၊ နဂါးရုပ်တွေနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ သက်တမ်းရင့် ဘုံကျောင်းတွေနဲ့ တရုတ်ရိုးရာမုန့်ပဲသရေစာတွေကို မျိုးရိုးစဉ်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းရောင်းချနေတဲ့ ဆိုင်တွေရှိနေသေးတဲ့ တရုတ်တန်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းထဲမှာ တိမ်မြုပ်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ရှိနေပါတယ်။ ဒါကတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ဟော်ပါကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့စက်ရုံက ထုတ်လုပ်ပြီး အာရှတိုက်အပြင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ တော်တော်များများမှာ သုံးစွဲနေတဲ့ ကျားပရုတ်ဆီက ရန်ကုန်မြို့၊ တရုတ်တန်းက စခဲ့တာ ဆိုတာပါပဲ။ ကမ္ဘာကျော် ပေါ့အဆိုတော် လေဒီဂါဂါတောင် ကျားပရုတ်ဆီကို သုံးစွဲတယ်လို့ South China Morning Port သတင်းစာက ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကျားပရုတ်ဆီက နာမည်ကြီးသလောက် … Read more
နွားမကြီးခမျာ ဝယ်တဲ့နေ့ကစပြီး အစာမစားပဲ မျက်ရည်တွေနဲ့ အော်ပဲအော်နေလို့ အရင်ပိုင်ရှင်အား မေးကြည့်တော့မှ ဦးဝင်းမောင် တစ်ယောက် ညနေကျောင်းဆင်းချိန်တွင် သားဖြစ်သူပြန်လာမှာကို တွေးပြီး စိုးရိမ်နေမိသည်။”ဖေကြီးရေ ဖေကြီး” ဟော သားပြန်လာပြီ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သားငယ်ဖြစ်သူ၏ မျက်နှာလည်းမကောင်း သားဖြစ်က ရုတ်တရက် ဖေကြီး ဒီနေ့ ညိုညို လာလည်းမကြိုဘူး အိမ်မှာလည်းမတွေ့ဘူး ဖေကြီး ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ သားဖြစ်သူ၏ မေးခွန်းကို ဦးဝင်းမောင် တစ်ယောက်ဖြေရန်ခက်ခဲနေ သားရယ် သားနဲ့ ညိုညိုနဲ့ သံယောဇဉ်ကို ဖေကြီးသိပါတယ်ကွယ်။ ဒါပေမယ့် ဖေကြီးတို့စပါးက ဒီနှစ် မအောင်လို့ စားဖို့အနိုင်နိုင် ဖြစ်နေတယ်လေ။ နောက်နေ့အတွက် အဖေတို့မှာ ဆန်ဖိုး မရှိတော့လို့ ညိုညိုကို ဖေကြီး ရောင်းလိုက်ရတယ်ကွယ် ဆိုပြီး စကားလည်းဆုံးရော သားငယ်လေးက ညိုညိုကိုပြန်ခေါ်ပေးဆိုပြီး ငိုလိုက်တာမှ … Read more
၁ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ငွေဝင်လာစေရမည့် ယတြာအလှူ
၁ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ငွေဝင်လာစေရမည့် ယတြာအလှူ ၁ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ငွေဝင်လာစေရမည် ယတြာအလှူ။ယတြာတွေကို သေချာတွက်ချက်ပြီးမှ မျှဝေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေဝင်လာစေရန်အတွက် အာမခံပါသည် Shareပြီးသာ သေချာလိုက်လုပ်ပါ မိတ်ဆွေတွေကို ထက်ဆင့်မျှဝေပေးပါ ငွေသေချာပေါက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ မြတ်စွာဘုရားကို မနက်၆:ဝဝကနေ၁၀:ဝဝအတွင်း ပြောင်းဖူးပြုတ်၁ဖူး ကွေကာအုတ်၁ခွက် ပူပူလေးကပ်လှုပေးပါ။ ပြီးရင် (၂၄)ပစ္စည်း ၅ခေါက်ရွတ်ပါ။ဘုရားကိုကပ်လှုရင် ခြေလက်မျက်နှာဆေးပြီးမှ သေချာကပ်လှုပါ။ Shareပြီး လုပ်ပါ ၁ပတ်အတွင်း ထူးခြားပါတယ်။ ဆုတောင်းရမှာက မြတ်စွာဘုရားကို နေ့စဉ် ယတြာအလှုပါ။ ယတြာတွေကို သေချာတွက်ချက်ပြီးမှ မျှဝေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေဝင်လာစေရန်အတွက် အာမခံပါသည် Shareပြီးသာ သေချာလိုက်လုပ်ပါ မိတ်ဆွေတွေကို ထက်ဆင့်မျှဝေပေးပါ ငွေသေချာပေါက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ မြတ်စွာဘုရားကို မနက်၆:ဝဝကနေ၁၀:ဝဝအတွင်း ပြောင်းဖူးပြုတ်၁ဖူး ကွေကာအုတ်၁ခွက် ပူပူလေးကပ်လှုပေးပါ။ ပြီးရင် (၂၄)ပစ္စည်း ၅ခေါက်ရွတ်ပါ။ဘုရားကိုကပ်လှုရင် ခြေလက်မျက်နှာဆေးပြီးမှ သေချာကပ်လှုပါ။Shareပြီး … Read more
သူဌေးတွေနဲ့ ဆင်းရဲသားတွေ အပြန်အလှန် မုန်းနေကြတဲ့ အကြောင်းအရင်း
သူဌေးတွေနဲ့ ဆင်းရဲသားတွေ အပြန်အလှန် မုန်းနေကြတဲ့ အကြောင်းအရင်း ဆင်းရဲသားတွေဂိမ်းဆော့နေချိန်မှာ..သူဌေးတွေ..အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ် ဆင်းရဲသားတွေဖုန်းသုံးနေချိန်မှာ..သူဌေးတွေ…အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ် ဆင်းရဲသားတွေအိပ်နေချိန်မှာ..သူဌေးတွေ..အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်. ဆင်းရဲသားတွေချစ်သူနဲ့ပျော်ရွှင်နေချိန်မှာ..သူဌေးတွေ…အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ကြဘူး ဆင်းရဲသားတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ငြီးငြူနေတဲ့အရာတွေကို သူဌေးတွေက မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းရှာကြံပြီး ကြိုးစားခဲ့ရတယ် ဆင်းရဲသားတွေ တစ်ရက်စာ၊ တစ်လစာအတွက်ပဲပူတဲ့အချိန်မှာ သူဌေးတွေဟာ ၅နှစ်စာကနေ နှစ် ၁၀၀ စာလောက်ထိပူခဲ့ရတယ် ဒ့ါကြောင့် သူဌေးတွေဟာ ဘာမှမလုပ်ပဲ ဇိမ်ကျနေတဲ့ ဆင်းရဲသားတွေမုန်းကြတာဖြစ်တယ် ဒီလိုနဲ့ အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာ သူဌေးတွေကို ဆင်းရဲသားတွေက ပြန်မုန်းလာကြတယ် ဆင်းရဲသားတွေကထင်တယ်. သူဌေးတွေဆိုတာ အချိန်ပြည့် ဇိမ်နဲ့နေရတယ် ဆင်းရဲသားကထင်တယ်..သူဌေးဆိုတာ ရေကန်အသင့်ကြာအသင့် ချမ်းသာလာတာဖြစ်တယ် ဆင်းရဲသားကထင်တယ်…သူဌေးတွေဟာ ဆင်းရဲတဲ့ဘဝ အကြောင်းနားမလည်ကြဘူး ဆင်းရဲသားကထင်တယ်….သူဌေးတွေချမ်းသာခြင်းဟာ အထောက်ပံ့ကောင်းတွေရှိလို့ပါ ဆင်းရဲသားကထင်တယ်…..သူဌေးတွေဟာ ခေါင်းပုံဖြတ်ကြတယ် ဆင်းရဲသားကထင်တယ်…..သူတို့ဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစား သူဌေးတွေလို မချမ်းသာနိုင်ဘူး ဆင်းရဲသားတွေကထင်တယ်…သူဌေးဆိုတာ..မဟုတ်တာတွေလုပ်လို့..ချမ်းသာလာတာ ဆင်းရဲသားတွေကထင်တယ်…ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းဟာ..ဘဝကိုအေးချမ်းစေတယ် ဆင်းရဲသားတွေကထင်တယ်…ချမ်းသာခြင်းဆိုတာ..ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ယောက်ယောက်ဆီကလာတယ်. ဆင်းရဲသားတွေကထင်တယ်…အခွင့်ရေးဆိုတာ ..သူ့အလိုလိုရောက်လာတတ်တယ် … Read more
အိမ်မှာရေခဲသေတ္တာရှိရင် ဖတ်ထားနော် ရေခဲသေတ္တာသန့်ရှင်းမွှေးပျံ့နေဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲ မီးဖိုခန်းထဲမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာ၊ တစ်အိမ်သားလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အရာဆိုရင် ရေခဲသေတ္တာကိုညွှန်ရမှာပါ။ အိမ်ရှင်မတို့တွေက ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အသားစိမ်းငါးစိမ်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံ၊ သောက်စရာအအေးတွေ၊ ပြန်နွှေးစားဦးမယ့်ထမင်းဟင်းတွေ စသဖြင့် စုံစုံစိစိထားရှိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနေရာတစ်ခုဟာ သန့်ရှင်းမှု့မရှိ့ညစ်ပတ်နေမယ်ဆိုရင် အစာအဆိပ်သင့်မှုတွေ၊ အစားကြောင့်ဘေးဖြစ်တာတွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေခဲသေတ္တာလေးသန့်ရှင်းမွှေးပျံ့နေစေဖို့ ဒီအချက် ၅ ချက်နဲ့ ရေခဲသေတ္တာလေး သန့်ရှင်းကြပါ။ ရေခဲသေတ္တာလေး သန့်ရှင်းကြမယ် အချိန်ပေးသန့်စင်ပါ ရေခဲသေတ္တာသန့်ရှင်းရာမှာ အတွင်းဘက်၊ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ရေခဲသေတ္တာအပြင်ဘက်ဆိုပြီး ၃ ပိုင်းခွဲခြားသန့်စင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာကို ရေတွေ၊ ဆပ်ပြာတွေအများကြီးနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဆေးချင်သလိုဆေးဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ရေခဲသေတ္တာတစ်ခုလုံးသန့်စင်မွှေးပျံ့သွားဖို့အတွက် အချိန်နည်းနည်းတော့ပေးရပါမယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ မီးကိုပိတ်ပါ။ရေခဲသေတ္တာထဲက မသန့်ရှင်းတဲ့ ညစ်ပတ်နေတဲ့ရေခဲတွေ ပျော်ကျသွားဖို့အတွက် ခဏစောင့်ရပါမယ်။ ပြီးမှ ဘေးနံရံက ခွက်တွေ၊ အထဲက … Read more
အဲကွန်းရေခဲသေတ္တာတွေမှာ ဂတ်စ် ကုန်တယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး (ဂျင်းမထိရအောင် ဖတ်ထားဖို့တော့လိုမယ်နော်)
အဲကွန်းရေခဲသေတ္တာတွေမှာ ဂတ်စ် ကုန်တယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး (ဂျင်းမထိရအောင် ဖတ်ထားဖို့တော့လိုမယ်နော်) သုံးလိုက်လို့ ကုန်သွားတယ် ဆိုတာမရှိပါဘူး/ အချိန် ကြာလို့ ကုန်သွားတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ နေရင်းထိုင်ရင်း ကုန်သွားတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တစ်သက်လုံးသုံး တစ်သက်လုံး မကုန်ပါဘူးတဲ့/ မီးဖို gas တွေလို ဖောက်ထုတ် မီးရှို့ ပစ်တာ မဟုတ်လို့ ကုန် သွားစရာ အကြောင်းမရှိ ပါဘူး။ ဘေဘီလည်းခံရပါများလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ ရေခဲသေတ္တာ၊ အဲကွန်းတွေမှာ သုံးတဲ့ Gas ဂတ်စ် ဆိုတာ refrigerant လို့ခေါ်တဲ့ အအေးပြု ဓာတ်ငွေ့ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်/ ဒီ refrigerant ( အအေးပြု ဓာတ်ငွေ့ ) တွေဟာ ရေခဲသေတ္တာတွေ၊ … Read more
ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေ နုပျိုလှပနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း လျှို့ဝှက်ချက် ဆန်ဆေးရည်တစ်ခွက်
ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေ နုပျိုလှပနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း လျှို့ဝှက်ချက် ဆန်ဆေးရည်တစ်ခွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးက နိုင်ငံတွေထဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသမီးတွေက နူးညံ့စိုပြေပြီး ချောမွတ်ပြေပြစ်တဲ့အသားအရေရှိခြင်းတို့ကြောင့် လူသိများထင်ရှားလှပါတယ်။ နည်းပညာတွေအတိုးတက်ဆုံး နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေကြတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေကတော့ လက်ရှိအသက်အရွယ်ထက် ပိုပြီးနုပျိုအရွယ်တင်စေဖို့အတွက် ရာစုနှစ်တိုင်လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တဲ့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းဟောင်းတွေကိုပဲ လိုက်နာကျင့်ကြံဆဲပါပဲ။ ဒီလိုထိရောက်မှုရှိတဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲကမှ အားလုံးလိုက်ပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ဆန်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်ဆေးရည်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာနိုင်မလဲ အသားအရေအတွက် ဘယ်လိုအထောက်အကူတွေဖြစ်စေမလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုတားဆီးပေးခြင်း ဆန်ဆေးရည်နဲ့မျက်နှာသစ်ခြင်းဖြင့် အရေးအကြောင်းတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ၂ ရက်လောက်နှပ်ထားတဲ့ဆန်ဆေးရည်က အသားအရေအတွင်းရှိ Collagen ထုတ်လုပ်မှုကို မြင့်တက်စေပြီး တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ နုပျိုတဲ့အသားအရေကို အချိန်အတော်ကြာထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။ Antioxidants တွေလည်း ကြွယ်ဝတာကြောင့် အရွယ်မတိုင်ခင် အရေးကြောင်းတွေဖြစ်မလာအောင် တားဆီးပေးနိုင်မယ့် သဘာဝဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်ပါ။ … Read more